Ethnic Nationalities Voice တိုင်းရင်းသားအသံ: ကချင်တပ်နဲ.ဗမာတပ်တိုက်ပွဲသတင်း၊ ဗမာတပ်ဘက်မှကချင်လူထုကိုတွေ.သမျှသတ်ဖြတ်တဲ့နည်းဗျူဟာတွေသုံး၊
ဇွန်လ ၁၈ ရက်နေ.သတင်း၊
စစ်ဝတ်စုံ ဝတ်ဆင်ထားခြင်းမရှိတဲ့ မြန်မာစစ်သားအမြောက်အများ ဒီကနေ့ ရထားဖြင့် မြစ်ကြီးနားမြို့သို့ ဆိုက်ရောက်လာပြီး... သူတို့အားလုံးကို လိုင်ဇာဘက်သို့ ပို့ဆောင်လိုက်ပြီ လို့ဒေသခံ မျက်မြင်သက်သေများက သတင်းပေးပို့လာပါတယ်.
ရှမ်းပြည်ဘက်တွင် ကချင်ယောင်္ကျား (၃) ဦးကို ဖမ်းဆီးပြီး ဂုံနီအိတ်တွက်ထည့်ကာ ရိုက်နက် ညင်းပမ်းပြီး မြန်မာ စစ်တပ်က သတ်ပစ်လိုက်ကြောင်း သတင်းရရှိ။
မန်ဂျယ်ဘက်မှ ချီတက်လာသော မြန်မာအစိုးရတပ်များသည် လမ်းတွင်တွေ့သော ကချင်တိုင်းရင်းသားများကို ဖမ်းဆီးသတ်ပစ်လိုက်ကြောင်း၊ ခုချိန်ထိ အသတ်ခံရသူ (၃) ဦးရှိသွားပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိ
ဒေါ့ဖွန်းယန် ခလရ (၁၄၂) တပ်မှ တိုင်းရင်သား လင်မယားနှစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးပြီး လင်ယောင်္ကျားကို ကြိုးဖြင့် တုတ်နှောင် နှိပ်စက်ပြီး မိန်းမဖြစ်သူးကို လင်ယောင်္ကျားရှေ့တွင်ပင် သားမယားပြုကျင့်ကာ သတ်ဖြတ်လိုက်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
Chatting with one of KIA offficers (Laiza, capital of KIO)
In this chatting said;
A couple (husband and wife) from Dawhpum Yang (a Kachin village under controlled of government) were captured by Burmese Infantry Battalion 142. After that, the wife was raped and brutally killed in front of husband who was being tied.
Three men and three women were captured in Northern Shan State, men were put intoarice bag and brutally beat to dead. Women were raped eventually tortured however later released.
In Manje Township, Burmese Reinforced Battalions captured whoever appeared on their sight and tortured to dead by means of suspicious, at least3persons were killed now, on dispatching way to KIA Camp.
Now,4girls from Na Lung village have been disappeared.
News Update: Between Kachin Army and Burma Army Wa...
News Update between the War of KIA and Burman Troo...
KIA Sniper Team Killed three Burmese soldiers. ဗမာ...
Kachinn Refugees fled from recent fight of KIA and...
Kacin Women in remote villages being Helpless, Tor...
Kachin War's Photo documents. ကချင်နဲ.ဗမာစစ်ပွဲဓါတ...
ကေအိုင်အိုနဲ.ဗမာစစ်တပ် ၅ ရက်ကြာတိုက်ပွဲတွင်းဗမာတပ်...
မြန်မာစစ်တပ်နှင့် KIA ကြား တစ်ညလုံး စစ်ဖြစ်နေ